Pologne: Notorian’ny mpianatra ny minisitry ny fampianarana teo aloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2010 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, македонски, বাংলা, Español, English
Nanapan-kevitra ny hitory ny Minisitry ny Fampianarana taloha Ryszard Legutko ireo mpianatry ny lisea roa A noho ny niantsoany azy ireo ho ‘zaza naranina (be sitrapo)’. Nanao fanangonan-tsonia , natolony ny talen'ny sekoly, tamin'ny herintaona ny mpianatra roa avy ao Wroclaw, Zuzanna sy Tomasz. Nolavin'ny tale izany.
Niadiana hevitra ny momba azy io tamin'ny media Poloney tamin'ny Desambra 2009 ary tamin'izany i Mr Legutko, mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eropeanina, no nilaza ireo mpianatra ho ‘zaza naranina tsy manan-katao afatsy ny miadaladala.’ ‘Tsy manan-javatra tsara kokoa hatao ve izy ireo hiatrehana ny fanadinany?’ hoy ilay mpanao politika, izay mihevitra fa mety tsy dia mety loatra ny hamaizana ireo mpianatra.
Mitaky famelan-keloka ampahibemaso ireo mpianatra sy onitra 5,000PLN, izay halefa any amin'ny fanampiana ny mahantra.
Mitsikera ireo Poloney mpampiasa aterineto:
pssz ao amin'ny forum.gazeta.pl:
Tafajanona ireo hazo fijaliana noho izany dia nandresy ny fiangonana. Ny atao hoe Demokrasia dia ny fanjakan'ny maro an'isa nefa manaja ny zon'ireo vitsy an'isa. Jadon'ny maro an'isa no misy eto amintsika. Nisy ve ny niera nialoha ny nannatonana an'ireny hazo fijaliana ireny teny amin'ny rindrina? Tsy voalaza ao amin'ny baiboly akory na dia ny fametrahana hazo fijaliana eny amin'ny rindrina aza.
Homo sapiens ao amin'ny forum.gazeta.pl:
Afaka alàna ireny hazo fijaliana ireny ary ny lanjan'izy ireny dia afaka hadinoina. Ny fanontaniana dia hoe, inona no hitranga? Inona no ho atolotr'ireo tanora ? Tsy misy.
MrBigB ao amin'ny www.wykop.pl
Nisy olona be taona nametraka tsikera, na mety na tsia ny mifampitsara, fa raha ny hevitro manokana dia mampahonena ihany rana ny tahaka ireny no anaovana fitoriana.
Dorota ao amin'ny forum.gazeta.pl:
Katolika ny tenako kanefa miombon-kevitra amin'ireo mpianatra ireo aho. Miady ho amin'ny fahazakana sy ny fahalalahana ara-pivavahana izy ireo.
Usualgirl manoratra ao amin'ny blaoginy:
Ny zava-misy dia tsy miraharaha ny hazo fijaliana ireo tsy mpino. Ny iray tamin'izy ireo dia niteny fa fandaniam-potoana ny firesahana an'izany satria raha mizotra amin'io lalana io isika dia hiafara amin'ny fandrarana dokambarotra momba ny hena satria mety hanafintohina ireo tsy mihinan-kena izany…
Firenena maro katolika i Pologne ary saropady ny miresaka hazo fijaliana any amin'ireny sekoly sy any amin'ny toeran-kafa ireny.
Tokony arahi-maso ity adihevitra ity fa mety hitohy any amin'ny media Poloney sy ny tontolon'ny blaogy.
Moldavia 04 Marsa 2022